फेसबुकमा लभ परेकि युवतीलाई हो’टेलमा भे’ट्न जा’दा आफ्नै बुहारी परेपछि……. « गोर्खाली खबर डटकम
एजेन्सी। सामाजिक सञ्जाल लभ अफेयर चलाउने गतिलो साधन भएको छ । क’हिल्यै नभेटका र नदेखेकाहरु फे’सबुकमार्फत सहजै साथी बन्छन् । कतिको घरबार बि’ग्रिएको छ भने कतिले बिहेबारी समेत यही फेसबुकले गराइदिएको छ ।तर, चीनमा एउटा यस्तो घ’टना भएको छ, अनलाइनमा साथी बनेर भेट्न जाँदा स’सुराबु’हारी पो परेछन् । एकआ’पसमा भे’ट्दा यी दुबै जना ला’जले पानी पानी मात्रै हुनु परेन्, बाबुले छोराको कु’टाइसमेत खानुपरेको समाचार एजे’न्सीहरुले जनाएका छन् ।
घटना चीनको हेलोगजियांग प्रान्तको हो । यी ससुरा र बुहारी दुबैले आफ्ना पति पत्निलाई झु’क्काएर च्या’ट गर्थे ।दुवै जनाले आफ्नो नाम र फोटो समेत बदलेका थिए । अ’नजानवश च्या’टमा भएको भेट र कुराकानी माया प्रेममा परिणत हुन था’ल्यो ।यसो त ५७ बर्षीया वां’गलाई अनलाइनमा साथी बनाउने र च्याट गर्ने लत नै थियो । वांग आफ्नै बु’हारीसँग कुरा गर्दा आफू एउटा कम्पनीको निर्देशक भएको भनेर ढाँ’टथे, श्री’मतीको मृ’त्यु भ’इसकेकाले आफू ए’क्लै भएको ती महिलालाई ब’ताउथें ।
बुहारी लिली पनि के कम ? उनी आफ्नो श्रीमान जे’लमा रहेकाले छोरासँग मात्रै बस्दै आएको बताउँदै आएकी थिइन् । हरराति यी दुईबीच च्या’ट्मा कुरा हु’न्थ्यो । काठमाडौं डेली पछि फोटो पठाउने कुरा भयो ।अनि दुबै जनाले आ’फ्ना साथीका राम्रा फोटो प’ठाइदिए । फोटो हेरिसकेपछि दुबैजनाले बेलुकी स्था’नीय हो’टेलमा ६ बजे भेट्ने तय गरे । लिली र वां’गबीच हो’टेलमा भेट्ने तय भएकै दिन लिलीका श्रीमान यात्राबाट घर प’र्किए ।
उनले च्या’टबारे सबै जानकारी पाएपछि दुबैलाई रं’गेहात समात्न हो’टलतिर लागे । काठमाडौं डेलीलिली जब हो’टेलमा गएर कोठा ढकढकाईन् त्यसपछि ढोका खो’ल्दा आफ्नै ससुरा पो परेछन् ।पछि श्रीमान पनि लिलीलाई प’छ्याउँदै हो’टल पुगेपछि ल’फ्डा सु’रु भयो । लिलीका श्रीमानले बाबु र श्रीमतीलाई कु’टपिट गरेपछि प्रहरी आइपु’ग्यो । अहिले फेसुबक लभको को च’क्करमा प्रहरीले सा’सुबुहारीलाई के’रकार गरिरहेको छ ।
दैनिक एक पोटी भुटेको लसुनको सेवनअरौ पाइनेछ कल्पनै नगरेका यस्ता फाइदाहरु !
सरकारले गति लिन नसकेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप
छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीलाई शिक्षादीपको सम्मान